धान खेतमा माछापालन यसरी गर्नुहाेस (सम्पूर्ण जानकारी र विधीसहित) - कृषि डेली
Home banner धान खेतमा माछापालन यसरी गर्नुहाेस (सम्पूर्ण जानकारी र विधीसहित)
यदि माछापालक कृषकहरुले माथिका बु‘दा हरुलाई ध्यान दिई धान खेतमा माछा पालन गर्ने हो भने एकै ठाउ‘बाट दुई बाली उत्पादन सजिलै लिन सक्छन् । अब आफै सोचौं धान खेतमा पालन गर्ने कि पोखरीमा ? एक पटक यो प्रविधि अपनाएर त हेर्नु होस् तब मात्र थाहा पाउन सक्नुहुनेछ । याे सामाग्री कृषि गुरूबाट लिइएकाे हाे ।
Previous articleअर्गानिक भनेकाे के हाे ? यस्ता छन यसका फाइदा
Next articleअसार ८ गतेकाे तरकारी तथा फलफूलकाे मूल्य हेर्नुहाेस